बिग बोसको घरमै गर्भवती भईन यी प्रतिष्पर्धी तेजस्वी प्रकाश , आखिर कस्को बच्चा छ उनको पेटमा ? « TopStar Khabar
२०७८ माघ ४ गते मङ्गलवार | 2022 January 18th Tuesday
बिग बोसको घरमै गर्भवती भईन यी प्रतिष्पर्धी तेजस्वी प्रकाश , आखिर कस्को बच्चा छ उनको पेटमा ?
२०७८ पुष २९ गते बिहिवार प्रकाशित
सानो पर्दाको सबैभन्दा चर्चित रियालिटी शो बिग बोसमा आएका धेरै प्रतियोगीहरुको प्रेमकथा सुरु हुने गरेको छ । बिग बोसको यो सिजनमा प्रतियोगी तेजस्वी प्रकाशले सबैलाई चकित पारेकि छिन् । वास्तवमा, तेजस्वी प्रकाशले उमर रियाजलाई आफू गर्भवती भएको बताएकी छिन् । यो सुनेर सबै छक्क परेका छन् तर, तेजस्वीले यो शोका होस्ट सलमान खानको आदेशमा यो सबै भनेकि थिईन् ।
वास्तवमा, बिग बोसको एक शो मा होस्ट सलमान खान र उनका पार्टनर तथा बलिउड स्टार गोविन्दाले तेजस्वी प्रकाशलाई उमर रियाजसँग ठट्टा गर्न लगाएका थिए । सलमान खान र गोविन्दा दुबैले तेजस्वीलाई आफूले उमर लाई के भन्न खोजेको बताएका थिए । प्रतियोगी तेजस्वी प्रकाश उमरसँग बोल्दै भन्छिन्– मलाई ग्याँस भरिएको छ यति भनेपछि उमर चर्को स्वरमा हाँस्छन् । तेजस्वी आ’क्रो’शि’त हुँदै भन्छिन्– यो मजाकको कुरा होइन ।
सलमानको निर्देशनमा तेजस्वी भन्छिन्, –म आमा बन्न जाँदैछु । यो सुनेर उमरको बोली नै रोकिएको थियो । उमर भन्छन्– के भन्दै छौ ? तेजस्वीले आफ्नो ठट्टा जारी राख्दै भनिन्,–के ग्यासका कारण केटी गर्भवती हुन सक्छ। उमर रियाज अलमलमा पर्छन् र त्यहाँबाट निस्किन्छन् । हाल उमर शो बाट भने बाहिरि सकेका छन् । उनले प्रतिक सहजपाल माथि हा’तपा’त ग’रे पछि उनलाई दर्शकको माध्यम देखाएर शो बाट निकालिएको हो ।
प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २९ गते बिहिवार
यहाँ हामीले नेपालमा बन्ने चार कोठे घरको लागत अनुमान विवरण तयार पारेका छौं।
२ रुपैयाँ दरको सिक्का आजदेखि बजारमा, दृष्टिविहीनले स्पर्श गरेर दर पत्ता लगाउन सक्ने
लामो नङ पालेरै विश्व रेकर्ड राखे श्रीधरले, नङकै कारण युवती विवाह गर्न मानेनन्
बिहेको १४ बर्षपछि अत्याधिक शारीरिक सम्पर्कको लत भन्दै श्रीमती अदालत पुगेपछि…
कुखुराको भाले ३० दिन देखि प्रहरी हि’रास’तमा, किन राखे त चौकिमा ? यस्तो रहेछ कारण
‘नर्कको ढोका’ बन्द गर्न राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तानको आदेश, आखिर के हो ‘नर्कको ढोका’ ? यस्तो छ भित्रि रहस्य
घरमा कमिलाको ताँती आएको छ भने नमार्नुहोस,यस्ता संकेत र भाग्य मेट्दै हुनुहुन्छ
बदलिँदो मौसममा पिनासको जोखिम , के कारणले हुन्छ पिनास! पिनासहुँदा के खाने,के नखाने ?
छोरी जन्माउने आशामा १३ छोरा बनाइसकेका दम्पती, अझै भन्छ्न: छोरी नजन्मे सम्म रोकिदैनौ
३० वर्षे पुरानो ग्यास्ट्रीक पनि ५ मिनेटमा निको पार्ने के हो यो अचुक औसधि ? (भिडियो सहित )
राँगोको मा’र हा’न्न तीन लाख रुपैयाँ दिने यिनै हुन् आर्यन खड्का !
पुर्व सचिव भिम उपाध्यायको देउवालाई सुझाव: कुलमान घिसिङ लाई पुन: नियुक्ति गर्नुहोस। जनताको बिश्वास जित्नुहोस।
भारतमा जिका भाइरस देखियो, जोखिममा नेपाल ? केहो जीका भाइरस कसरि सर्छ जानिराख्नुस !
भ्याक्सिन लगाएका केहीलाई प्यारालाइसिसको समस्यापछि एफडीएको नयाँ चेतावनी
सवारीसाधन चालकले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, कसरी हुन्छ चेकिङ्ग ?,,हे’र्नुहोस।
महिलाहरु ४० लागेपछि यस कारण जाग्छ फेरी बैस
सूचना विभाग दर्ता नं: १९१६/०७६-७७
अध्यक्ष : प्रकाश कुमार खड्का
बिज्ञापन को लागि:9844844368
copyright © topstarkhabar.com, All Rights Reserved.